Aluminium ingcinezelo uqinisa
Ubambo lokuqina lusetyenziselwa ukumisa kunye nokuqinisa imigca ye-LV-ABC ngesithunywa esingathath'icala.
Ezi zibopho kulula ukuzifaka ngaphandle kwezixhobo kunye ne-suiatble yeemeko ezahlukeneyo zemozulu.
Intambo yekhampasi yokubamba
EI-lectric cable accessory C imilo yombhobho wobhedu osetyenziselwa ukukhusela umbane kulwakhiwo, umqhubi wokuqinisa kunye nokunxibelelana nomsebenzi womnatha, owenziwe ngezinto zobhedu zokumelana nokuthomalalisa ulungelelwaniso lombane olungileyo, ukumelana nokubola okuhle kunye nofakelo olufanelekileyo, imveliso ekhethekileyo, i Ixabiso liyakhuphisana.
UKUZENZEKA NGOKUZENZAKALELAYO STRAND GUY VISE
IStrand Vise ikwabizwa ngokuba yi-othomathikhi yomntu ocingayo, sisixhobo esime njengekhowuni esihlala sibekwe emazantsi eepali zokudlulisela. Apha inxibelelana nezantsi mfo ucingo. I-Strand vise ikwasetyenziswa kwimigca ephezulu apho idityaniswe khona nezicelo zokugqibela. Umsebenzi wawo ophambili kukuyekisa ucingo lomfana kunye nentambo ephezulu.
I-strand vise yenzelwe ukunamathela kwikhebula usebenzisa umgaqo wokubamba umnwe. Apha, intwasahlobo yiprojekthi emihlathini yayo kwikhebula kungoko ukuseta isixhobo. Imihlathi iyakhululwa ukunqanda ukutyibilika ukuya phezulu.
Into elungileyo malunga ne-strand vise ayinayo i-nut yokusebenzisa i-torque kwiintambo. Oku kuthetha ukuba akukho sidingo sokuyicofa emkhonweni.
Ulwakhiwo oluqinileyo lwe-strand vise luyenza ithembeke kuluhlu olubanzi lwezicelo kunye nakwimimandla eyahlukeneyo. Iqukethe intsimbi ehlanganisiweyo engenamandla kuphela kodwa ikhuselekile ekutshatyalalisweni kweekhemikhali.
I-Strand vise inokusetyenziswa ngemicu eyahlukeneyo kubandakanya i-alum weld, i-galvanized, i-aluminised, kunye ne-EHS, i-strand yensimbi.
Uyilo lwe-strand vise luyenza ukuba ihambelane noluhlu olubanzi lweentambo zeshishini. Inokuxhasa uluhlu olubanzi lweengcingo ngenxa yoyilo lwayo lweebhali.
I-GUY-LINK isetyenziswa ikakhulu ngomnxeba kunye nezinto zombane ukuphelisa umtya okanye intonga phezulu kwipali nakwiliso le-anchor. Ukurhoxiswa kweStrand, iGuy Strand kunye neStatic Wire. Isetyenziselwa ukuphelisa inkxaso ye-strand messenger, nakwiziphelo eziphezulu nasezantsi zabafana.
Ukwenza isicelo sokucoca ngentloko okanye iingcingo zomfana ezixhasayo
Izixhobo ezizenzekelayo ziyilelwe ukusetyenziswa
Amandla aPhakamileyo (HS), aqhelekileyo (Com), Nokia-Martin (SM), Izixhobo
(Util) kunye neBell System strand
Zonke iintlobo zeentambo zomfana ezidweliswe apha ngasentla, kunye naMandla aPhakamileyo aNgaphezulu (EHS) kunye
• Zonke ii-GLS ezizenzekelayo ziya kubamba ubuncinci be-90% yomfo
ucingo rated ukophuka amandla
Isixhobo: I-Shell-Amandla oMbane oPhakamileyo weAluminiyam
Imihlathi - yentsimbi
Izibophelelo zemigca eshushu (isibophelelo somnxeba osishushu zizixhobo zomgca eziphilayo ezisetyenziselwa unxibelelwano lweetephu zokuhambisa unxibelelwano.
I-1-Bronze alloy kunye nealuminium alloy ekubunjweni inikezela ngamandla aphezulu, ukumelana nokubola kunye nokuhambelana komqhubi
2-Ububanzi bomhlathi obandisiweyo buthetha unxibelelwano oluqhubayo lomqhubi, ukunciphisa ubushushu ngokudibeneyo, ukuhamba kancinci kokubanda komqhubi kunye nokunciphisa ukujija komqhubi ngexesha lofakelo
Inxalenye ye-3-yeNtwasahlobo elayishiwe ibuyekeza ukuhamba kobandayo kunye nokuseta okuqinisa ukungcangcazela kwetorque
Inqaku le-4-yeNtwasahlobo elayishiwe ihlawula ukuhamba kobandayo kunye nokuzinzisa ukuqinisa ukungcangcazela kwethambo
Iibhokhwe ezi-4 ezibunjiweyo zibonelela ngamandla emandla kunye nokwandiswa okufanayo xa kulayishwa
I-5-Icala elibekwe ecaleni kwithepu kuthintela ukubola komqhubi okanye ukubamba konxibelelwano lwebimet
Ikhampasi yeAluminiyam eshushu yeNgcaciso
I-Line Line Clamps zizixhobo ezisebenza ngokuhambelana nokunxibelelana kweempompo zokuhambisa.I-Bronze Alloy kunye neAluminiyam ingxubevange yokuphosa inikezela ngamandla aphezulu, ukumelana nokubola kunye nokuhambelana komqhubi.
Ububanzi bomhlathi obandisiweyo buthetha unxibelelwano oluhle kakhulu lomqhubi, ukunciphisa iqondo lobushushu ngokudibeneyo, ukuhamba kancinci kokubanda kunye nokunciphisa ukujija komqhubi ngexesha lofakelo. Unxibelelwano lwempompo esecaleni lubeka ecaleni ukuthintela ukubola komqhubi okanye ukubamba konxibelelwano lwe-bimetal. Uvavanyo lwe-Cycle oluyimpumelelo lwe-ANSI C119.4 lubonelela ngesiqinisekiso sokuba i-MPS yomtya oshushu wokubamba uyokumelana nobungakanani bonxibelelwano olufakelwe ngokufanelekileyo.
YH edityanisiweyo Camera Zinc oxide Arrester
Ngasekupheleni kweminyaka engama-20th kwenkulungwane, edityanisiweyo camera zinc oxide arrester luhlobo lwemveliso isizukulwana esitsha esikhuthaza kwintengiso yase-United States, Japan kunye amanye amazwe. Yeyona nto ihambele phambili ngokuthelekiswa naleyo yesiqhelo. Ukungeniswa kwale teknoloji ngo-1980, amazwe ethu ayiphuhlisile kwaye ahlangana nayo iimfuno ze-IEC. Izinto eziqulunqwayo ze-Polymer zincinci, ukukhanya, ukunganyangeki kongcoliseko, ubungqina bokuqhushumba kunye nobungqina bothukile xa kuthelekiswa nezinto ezenziwe ngeglasi kunye ne-porcelain.
Itayi yentsimbi engenasici
Material: Stainless 201/304/316, Zonke ubude ziyafumaneka ngesicelo sakho
Ubhedu, Aluminium Split bolt isinxibelelanisi
Isidibanisi seBolt esahlukileyo
Izinto eziphathekayo: ubhedu
Unyango Surface: tin ngumfanekiswana / ubhedu ngumfanekiswana
Ubungakanani obukhoyo (indawo enqamlezileyo): 16mm2 - 240mm2
Ubhedu, iAluminiyam Split bolt connecto ilungele ukulandelelana kunye nokuhanjiswa komqhubi kumnatha wombane, owenziwe ngobhedu.Split-bolt inemisonto ebaleka simahla kwaye kulula ukubamba iiflethi zesitshixo. Kwakumelana kakhulu nokuqhekeka nokubola.
Uhlobo lokuqinisa uqinisa T Uhlobo uqinisa
Izinto eziphathekayo: 99.9% Ubhedu olunyulu
Umphezulu: Tin ngumfanekiswana
Iqingqiwe ziibholthi kwaye isetyenziselwa unxibelelwano phakathi kwezixhobo zombane ngentambo kunye nezixhobo zokuhambisa zangaphakathi
ISetyhula Splice Terminal
Uchungechunge lwe-OT lufanelekile ukudibanisa abaqhubi beethusi (OT-3A ukuya kwi-OT-1000A) kwintambo yamandla kunye nezixhobo zombane. Zenziwe ngetyhubhu yobhedu T2 kwaye zigqunywe nge-tin okanye nge-asidi ecocekileyo. Iqondo labo lobushushu elisebenzayo -55 ukuya ku-150 ℃.